आफूलाई सेक्सी देखाउन मन लाग्छ–प्रियंका « मेचीखबर
आफूलाई सेक्सी देखाउन मन लाग्छ–प्रियंका
८ श्रावण २०७२, शुक्रबार ०९:१० मेचीखबर
प्रियंका कार्की फिल्मी अभियन र म्युजिक भिडियो मोडलिङ दुवैतिर फैलिएकी छिन् । फिल्म र म्युजिक भिडियोको मोडलिङ दुवैबाट चर्चा पाउँदै आएकी छिन् । फिल्म क्षेत्रमा आएको छोटो समयमै आफूलाई स्थापिग गराउन सफल उनले लगातारको कामका कारण पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । उनले सुन्दरी कार्कीसँग गरेको कुराकानीको सार ।
तपाई नायिकका कि मोडल ?
– म नायिका हुँ मोडल होइन । धेरै फिल्ममा अभिनय गरिसके । त्यसैले मलाई फिल्ममा अभिनय गर्न मन पर्छ । मलाई दर्शकले मोडल भन्दा पनि नायिका नै भनेर चिन्नु हुन्छ । यसकारण म नायिका हो ।
अमेरिका बस्दा फाइदा पुग्यो कि नेपालमा बसेर कलाकारितामा लाग्दा ?
– मलाई अमेरिकामा बस्दा र नेपालमा बस्दा दुवैतिर फाइदा नै छ । किनभने अमेरिकामा बस्दा मैले अध्ययन पुरा गर्ने मौका पाए । त्यही पढेको कुरा आज नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाएको छ । नेपालमा बस्दा पनि त्यतिकै फाइदा भएको छ । फिल्ममा काम गर्न पाएकी छु ।
तपाईलाई बजारमा सय वटा फिल्म खेलेर एउटा फिल्म हिट हुने नायिका भन्छन् नी ?
– खै, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । मैले खेलेको फिल्मको संख्या १ सय पुगेको पनि छैन । नेपालमा वर्षमा ३–४ वटा फिल्म हिट हुन्छ । मैले खेले मध्ये नाइ नभन्नू ल –२ र ३ हिट भएका छन् ।
फिल्ममा तपाईको काम भन्दा कार्यक्रममा तपाईले लगाएको ड्रेसको चर्चा बढी हुन्छ नि किन ?
– हेर्नुस म पब्लिक फिगर भइसकेपछि कस्तो ड्रेसअप गर्ने भन्ने कुरामा एकदमै कन्सिएस हुनु पर्छ । अर्को कुरा शो विजनेसमा लागिसकेपछि कसरी हुन्छ आफूलाई सेक्सी देखाउन मन लाग्छ । प्राय कार्यक्रम वा इभेन्टमा जाँदा अरुभन्दा म नै फोकस भएको हुन्छ . किनभने मैले गरेको सेक्सी ड्रेस अपले सबैको ध्यान तानिरहेको हुन्छ । पब्लिक फिगर भइसकेपछि सेक्सी देखाउनु जरुरी भइसक्यो । फिल्मा अभिनय गर्दा पनि म आफनो फेसनप्रति कन्सियस छु । फिल्ममा आफ्नो क्यारेक्टरलाई न्याय दिन फेसनमा सम्झौता गर्दिन ।